Online Juction Feed: 2014-10-26
जिम्बल माईला बाले अधिंयां पाल्न दिएको भैंसी बाली गएर भरे भोली भएपछी बुढाले बेचे । भैंसी पालेको बापत एउटा पाडी किनेर दिए मेरो लागी । जिन्दगीमा चौपाया धेरै पाले पनि चोखो आफ्नो नामको भनेको त्यही पाडी थियो । किन नपाओस त्यसले मायाँ छोराछोरीलाई भन्दा मायाँ गर्दथे गाईने । बिहान एक भारी बेलुकी एक भारी कती खाओस कती मल बनाओस । बुढाबुढी घाँस काट्ने हाल्ने कुँडो खुवाउने मलमुत्र तह लगाउने भन्टयाङ्ग भुन्टुङ्ग चराउने आहाल बसाउने, सबैको मायाँ मझैले सप्रीयो ।
दुई बर्ष पुग्दा नपुग्दै बैंस उर्लीयो त्यसलाई । त्यसलाई पोई चाहीएको मलाई मोही चाहीएको रिठ्ठे कांईलाको रांगो मातेको छ अरे कुरो मिलीहाल्यो । रिठ्ठे कांईलाले किन छोड्थ्यो पचास पैसा ठटायो फिस अरे ब्याउने नब्याउने ठेगान छैन त्यसका किग्रीयाको मस्ती तिर्नै पर्र्यो नी । गन्य मान्य जान्ने सुन्ने सबैले ब्याउँछ भने म पनि ढुक्क थिएन । हैन कती टाठो हो रिठ्ठेको बाहान आफुलाई कती दिन लाग्याथ्यो त्यसलाई एकैछिन । दश महिनामा ब्याउने ओहो अरू बेलामा त बर्ष पनि कती छिटो गए जस्तो लाग्थ्यो तर यसपाली भने दश महिना पनि दश बर्ष जस्तै अत्यास लाछ । भुन्टेकी आमाको भन्दा भैंसीको पालामा पो अत्यास लाग्यो त ।
भैंसी भरे भोली हुंदै गएपछी जहान केटाकेटी वल्ला घर पल्ला घर सबैतिर खुशी भए तर म भने निराश । ओहो अब कती थोक चाहिने हो बा दुहुनलाई गहुवा, तताउनलाई कराई खनाउन मोथ्नको लागी ठेकी मदानी नेती सरो के के चाहिने हो के के । अन्न दाना खुवाउन पर्छ रे छोराछोरीलाई खुवाउने त छैन भैंसीलाई कहाँबाट ल्याएर खुवाउनु । बा हाम्रो भैंरी ब्याए पछी मत धेरै ब्याउती, दुध, दही र मोही खान्छु छोरो भन्छ । बा कहिले खिर कहीले कुराउनी पकाएर खाने है छोरी भन्छे । बा म घिउ खाएर सबैलाई जित्दीन्छु छोरो आश गर्छ । बा अब हामी मोही माग्न जान पर्दैन हगी छोरी सोध्छे । तिम्रा घरमां आएपछी बल्ल अब दुहुनु भैंसी देख्न पाईने भो श्वास्नी कुर्लन्छे, तेरा बा कहाँ मात्र खाकी नी म कुर्लन्छु । त्यही खां बलले त तिम्रा घरमा गरि रहेछु नि । तिम्रा घरको जस्तो खान्की भए त उहिल्यै सुकेर मर्थें नी श्रीमती कुर्लन्छे । माईतिको धाग नला चोथाले हाम्रा तिघ्रा चांही लाकै छन क्यारे सेतो तिरीन देख्न नपाए पनि म कुर्लन्छु ।
अब मोही माग्न लोटा बोकेर माथिल्लो गाउं जान नपर्नी भो ढुसेनी कान्छी रमाउछे दुःख गर्ने चाहीं म घिच्ने त्यो पोडे दिन्न म मुर्मुरीन्छु । तिखे कान्छाको भैंसी ब्याए पछी म ल्याउनु पर्ला मेरो घरमा पाल्ने जस्तो छ गजेडी बुढा आशा गर्दछन । यो भैसी ब्याएपछी बेच्न पाए चामल किन्न हुन्थ्यो आफ्नो दौरा सुरूवाल फेर्न हुन्थ्यो श्रीमतीको फरीया फेर्न हुन्थ्यो केटाकेटीका भोटाचोला फेर्न हुन्थ्यो यसो तिरोतारो तिर्न हुन्थ्यो । अन्त खर्च नगरीकन कतै उजिन्या हाल्न पाए पनि अधियां त गर्न पर्थेन । मनमा कुराहरू खेल्दछन छोराछोरीको मुहार हेर्छु मायां लाग्छ ब्यवाहार सम्झन्छु कांडा लाग्छ बित्यासै पारो के गरौं गरौं । मनमा कुराको बाढीले उराल्दा न दिनमा भोक लाग्छ नत रातमा निन्द्रा । मलाई भैंसी रोगले सताउन थाल्यो चिन्ताले चिता पुर्याउंछ भन्छन म छट्पटाउन थालें भित्र भित्रै मन जलीरहयो पिडा भईरहयो । मलाई पिडा उत्पन्न गराउने भैंसी प्रती नै रीस उठ्न थाल्यो भैंसीलाई हर्न मन लागेन त्यसको स्याहार गर्न मन लागेन त्यो नहुंदा मलाई कती आनन्द थियो भैंसीको नाम लिदैंमा रीस उठ्न थाल्यो । घरकाले परकाले के भो भनेर सोध्न थाले तर केही बोलीन घर जलेको भए सबैले देख्थे मन जलेको कस्ले देख्ने ।
भैंसीलाई ब्याथा लागे जस्तो छ श्रीमती कुर्लदै आई मन अन्तै उडाएर बुढो शरीर घचेटदै त्यतै लगें । धेरै बेर सम्म भैंसीले पाडो खसाल्न सकेन भैंसी डंरङ्ग लड्यो छट्पटाई रहयो मलाई मेरो पिडा उतै सरे जस्तो लाग्यो उसको पिडाले उसको प्राणपखेरू उडायो । जहान बाल बच्चा रून कराउन थाले तर मेरो बिझेको कांडो आफैं निस्कीयो घाउ निको भयो । गाउंका लाठे खोजेर त्यसलाई खाल्टो खनेर पुरीदिएं । बल्ल जलेको मनमा शितलता आयो । म पहिलेकै अबस्थामा फर्कीएं बेक्कारमा भैसीको लफडामा फसें त्यो नहुंदा पनि मेरो जिन्दगी चलीरहेको थियो अब पनि जेनतेन चल्ला धन्न भैंसी रोग बाट बाचें म मुस्कुराएं ।
लेखक : राजन पनेरु
राशीले पनि यौन जीवनमा प्रभाव
हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो । यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । कसैलाई यौन सम्बन्ध राख्दा सादा तरिका मन पर्छ भने कसैलाई विभिन्न तरिका अपनाउन मन पर्छ । कसैलाई कामुक कुराकानी मन पर्छ भने कसैलाई एक अर्कालाई हेरे मात्र पुग्छ ।
हालै ज्यौतिष शास्त्रले यौन जीवनमा राशीले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने कुरा पत्ता लगाएको छ । तीनलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ :
१. मेष राशिका मान्छे छिट्टै आवेशमा आउँछन् ।मेष राशिका मानिसमा कामुकता अत्याधिक हुन्छ । तर
लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राखिरहन भने मन पराउँदैनन् ।यो राशिका मानिसहरु कम समयमा धेरै यौनिक आनन्द लिनेमा विश्वास गर्छन् । यौन सम्बन्ध राख्ने वेलामा यिनीहरु आतुर हुन्छन् ।
२. वृष राशिलाई चुम्बन मन पर्छ ।वृष राशिका ब्यक्ति धैर्यशाली हुन्छन् । यिनीहरु आवेशमा आउँदैनन् । चुम्बन यिनीहरुलाई निक्कै मन पर्छ । यिनीहरुले यौन सम्बन्ध लामो बनाउन चाहन्छन् र एक अर्कालाई माया गर्नु पर्ने चाहन्छन् । यिनीहरुलाई यौन सम्बन्धका लागि पहल गरेको मन पर्छ ।
३. मिथुन राशिलाई प्रेमालाप मन पर्छ ।यो राशिको स्वामी बुध हो त्यसैकारण कामुक भावना प्रवल हुन्छ । यिनीहरु पनि निक्कै आतुर हुन्छन् । यौनका लागि यिनीहरु छिटै तयार हुन्छन् । यौन सम्बन्ध गरिरहँदा यिनीहरुलाई प्रेमालाप पनि गरेको मन पर्छ । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरको सन्तुष्टीप्रति पनि सचेत हुन्छन् ।
४. कर्कट राशिवालाहरु प्रेममा उत्साहित हुन्छन् ।यो राशिका मानिस भावुक र मानसिकरुपमा संवेदनशील हुन्छन् । यिनीहरुको यही स्वभावका कारण यौन आनन्द त्यति लिन सक्दैनन् । यिनीहरुलाई आफ्नो पार्टनरको भन्दा पनि आफ्नो खुसी बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यो राशिका मानिसहरु प्रेमको आनन्द लिन जान्दैनन् र जीवनमा कमि महसुस भैरहन्छ ।
५. सिंह राशिले पर्खिन्छन् पार्टनरको इशारा । यो राशिका ब्यक्ति स्थिर स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरुको भावना सहजै ब्यक्त हुँदैन । तर इशाराको पर्खाइमा भने हुन्छन् । यौन सम्बन्धको समय यिनीहरु निक्कै जोश सहित प्रस्तुत हुन्छन् । जोशले गर्दा पार्टनरको भावना भने त्यति बुझ्दैनन् ।
६. कन्या राशिमा यौनप्रति विशेष रुची कमी हुन्छ । यो राशिका मानिस केही लाज मान्ने स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरुले प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीसँग प्रेम ब्यक्त गरिहाल्दैनन् । यद्यपी चासो भने निक्कै धेरै हुन्छ । यो राशिका मानिस यौन सम्बन्धको बेला समय बर्बाद गर्दैनन् । प्रेमप्रति भने पुरै इमान्दार हुन्छन् । तर मुडी स्वभाव भने हुन्छ ।
८. वृश्चिक राशिमा कामुक भावनाप्रवल हुन्छ ।वृश्चिक राशिको स्वामी मंगल भएका कारण
यो राशि भएका मानिसमा कामुकता बढी हुन्छ । यिनीहरुको अति उत्साहका कारण पार्टनरलाई भने केही कठिन हुन्छन् । प्रेमका कुरामा यिनीहरु भावुक हुन्छन् ।
९. धनु राशि जतिबेला पनि यौनका लागि तयार हुन्छ । यो राशिका मानिसको विशेषता के हो भने यिनीहरु
जतिबेला पनि यौन र प्रेमका लागि तयार रहन्छन् । यिनीहरुलाई यौन क्रिडाको समयमा चुम्बन गर्न र अरु क्रियाकलाप गर्न मन पर्छ ।
१०. मकर राशिलाई चुम्बन मन पर् । यो राशिका मानिस प्रेम सम्बन्धका विषयमा गम्भीर हुन्छन् । यिनीहरु साथीप्रति समर्पित हुन्छन् । प्रेममा विश्वास गर्न लायक राशि मानिन्छ मकर । यिनीहरुलाई यौनक्रिडाको समयमा चुम्बन अत्याधिक मन पर्छ । तर पार्टनरको सन्तुष्टी प्रति कम सचेत हुन्छन् ।
११. कुम्भ राशिलाई प्रेममा नयाँ नयाँ प्रयोग मन पर्छ ।यो राशिका ब्यक्ति यौन क्रिडाका लागि अति उत्साहित हुन्छन् । यसमा नयाँ नयाँ आसन र शैलीको प्रयोग गर्न मन पराउँछन् । यौन क्रिडा गरिरहँदा अन्य कुरा गर्न मन पराउँदैनन् । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरको सन्तुष्टीलाई बढी ध्यान दिन्छन् ।
१२. मीन राशिको सम्बन्ध सुखद र आनन्द दायक हुन्छ । यो राशिका मानिसमा भावनाको प्रवलता हुन्छ । पार्टनरको भावना बुझेर सन्तुष्टीमा ध्यान दिन्छन् । यिनीहरुमा पनि यौन चाहाना अत्याधिक हुन्छ । कुम्भ राशि जस्तै नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न मन पराँउछन् ।
स्तन बढाउने उपायहरु
✍ जानिराखौं स्तन शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन, यौनका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्तनको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ। स्तनको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ। स्तनको आकार तथा आकृतिले महिलाको मानसिकतामा ठूलो प्रभाव हुन सक्छ। स्तनसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ। यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। व्यक्ति अनुरूप स्तनको स्वरूप एवं आकारमा धेरै विविधता पाइन्छ। स्तनमा भएका तन्तुका आधारमा यो कुनै ठूलो वा सानो हुन्छ। सामान्यतयाः स्तनको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुराहरु मध्ये स्तनका तन्तुको मात्रा, वंश, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्तनको छालाको मोटाइन वा तन्कन सक्ने गुण, रागरस (हार्मोन) हरूको प्रभाव आदि हुन्। स्तनको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। किशोरावस्थामा स्तनको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र त्यति बेला यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिएका हुनाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा हुन्छ। उमेर बढ्दै गएपछि स्तनको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ। स्तनको आकारमा वंशाणुगत प्रभाव एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर पोषणको। यी दुवैको संयुक्त प्रभाव स्तनको आकार निर्धारणमा महत्वपूर्ण छ। आमा र दिदीहरूको स्तनको आकार प्रकारसँग धेरै मिल्नु वंशाणुगत कारण हुनसक्छ।
# के पातली हुँदैमा स्तन पनि साना हुन्छन् ?
- तपाईंले आफूलाई पातली भन्नुभए पनि तौल देख्नुभएको छैन। शरीरको तौल अनुसार अन्य भाग जस्तो ठ्याक्कै नहुने भएपनि तौल कम हुँदाको स्तन पनि सानो हुने स्थिति रहन्छ। हामी शरीरको बडी मास इन्डेक्स हेरेर तौल सामान्य भन्दा कम वा बढी भएको निक्यौल निकाल्छौं। सामान्यतः हामी वयस्क व्यक्तिको उचाइ र तौलका आधारमा शरीरमा कति ‘बोसो’ छ नाप्छौं । यसलाई बडी मास इन्डेक्स भनिन्छ । हुन त यो पद्धतिका पनि आफ्नै सीमितताहरू छन्। यदि १८ दशमलव ५ देखि २४ दशमलव ९ सम्म छ भने त्यसलाई र सामान्य तौल मानिन्छ । यो २५ देखि २९ दशमलव ९ सम्म भएको स्थितिमा तौल बढी भएको मानिन्छ भने यो ३० भन्दा बढी भएको स्थितिमा ‘मोटो’ भनिन्छ । त्यसैगरी १८ दशमलव ५ भन्दा कम भएको व्यक्तिलाई कम तौल भएको मानिन्छ। तपाईंको उचाइ ५ दशमलव ४ इन्च र तौल ४५ किलोग्राम छ, भने तपाईंको १७ हुन्छ। यो तौल सामान्य भन्दा कम हो। त्यसैले पोषणमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। पहिले तौल बढी भएर पछि घट्न गएको स्थितिमा पनि स्तनको आकारमा कमी आउनुका साथै कसिलोपनमा पनि कमी आउन सक्छ अर्थात् नरम हुनसक्छ। तौलमा थोरै मात्र उतार-चढाव हुँदा स्तनमा परिवर्तन नदेखिन सक्छ।
* कृतिम उपाय गरेर स्तनको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढान सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्तनलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ। सौन्दर्यसँग स्तनको आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। त्यसै कारणले संसारभर नै स्तनलाई बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ। छोटकरीमा केही प्रमुख विधिको चर्चा गरौं।
१. क्रिम प्रयोग गरेर स्तन वा मुन्टोको मालिसले स्तनको आकार बढ्ने दाबी गरिए पनि यसले ‘स्थायी’ रूपमा आकार बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन। केही कसरतले छातीको मांसपेशीलाई बलियो र ठूलो बनाउँछ र यस्तो स्थितिमा स्तन ठूलो भए जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसले स्तनको ‘कपको आकार’ लाई परिवर्तन गर्दैन। विभिन्न रसायनिक
औषधियुक्त मलमको प्रयोग अर्को उपाय हो।
उत्पादनकर्ताको भनाइमा यस्ता मलमले सीधै स्तनको तन्तु तथा कोषमा कार्य गरेर त्यसको वृद्धि गराउँछ। हाल स्तन बढाउने विभिन्न किसिमका खाने चक्की विश्व बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन्। जडिबुटी पनि भएको दाबी गरिएका ती औषधि निर्माण कर्ताहरूको भनाइमा यसको सफलता निकै छ। जे सुकै दाबी गरिए पनि अमेरिकी नेशनल रिसर्च सेन्टर फर ओमान एण्ड फ्यामीलिज जस्ता संस्थाले यस्ता कुरा प्रमाणित गर्न बाँकी नै छ। त्यसबाहेक स्तनको आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ। शल्यक्रिया एउटा अर्को प्रचलित उपाय हो। शल्यचिकित्साले नकारात्मक प्रभावबिना नै नतिजा दिन सक्ने दाबी गरिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन। शल्य चिकित्सा गरेर स्तनको आकार बढाउन सकिन्छ, तर अत्याधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कुप्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईंले फोम भएको ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ? स्तन कसैलाई देखाउनुपर्ने अङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अङ्ग हो। यसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तैः
२. थुनचोली (ब्रा) भित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्तनलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ। श्रीमानलाई तपाईंको स्तनका सम्बन्धमा कुनै गुनासो छैन भने यो एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ। स्तन सानै भए पनि त्यसले यौन सुख दिन र दूध उत्पादन गर्न सक्छ। अन्तमा के भनौं भने आफ्नो तौल बढाउन तिर पनि ध्यान दिनुहोस् त्यसबाहेक प्रकृतिले दिएको स्तनको आकारमा सहज बन्ने प्रयास गर्नु बेस हुन्छ।
गुप्ताङ्गको दुर्गन्धबाट पार पाउने घरेलु उपायहरु
महिलाहरुमा गुप्ताङ्गको दुर्गन्ध एक सामान्य समस्या हो । जिवाणु, यिस्टको संक्रमण अथवा सफाइमा ध्यान नदिएका कारण गुप्ताङ्गमा दुर्गन्धका हुने गर्दछ । गुप्ताङ्गको दुर्गन्धले कतिपय अवस्थामा महिलालाई निकै असहज महसुस गराउने भएकाले यसलाई हटाउन यथाशिघ्र कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
# गुप्ताङ्गमा दुर्गन्धका कारणहरुः
७. बास्नादार र छालाका लागि कठोर साबुनको प्रयोग
* बच्ने घरेलु तरिका
१. प्रशस्त पनी प्रसस्त पिउनुहोस्: पानी अत्याधिक मात्रामा पिएर दुर्गन्धबाट पार पाउनका लागि तपाईंले प्रत्येक दिन ८ देखि १० ग्लास पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । पानीले शरिरबाट विषादि र जिवाणुलाई हटाउने काम गर्दछ ।
२. दही : दही खानाले गुप्ताङ्गको दुर्गन्धलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसमा ल्याक्टोबेसिलसको मात्रा अधिक हुने भएका कारण गुप्ताङ्गको पीएचलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्दछ ।
३. मेथीः दुई चम्चा मेथीलाई एक गिलास पानीमा रातभरी भिजाउनुहोस् । अर्को दिन उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा मेथी छानेर पानी पिउनुहोस् । यो तरिकालाई दुई हप्तासम्म अपनाउनुहोस् । मेथीले गुप्ताङ्गको दुर्गन्ध हटाउन निकै धेरै सहयोग गर्दछ । यदि यसलाई नियमित रुपमा पिउने गरेमा यसले महिलाको हर्मोन स्तरलाई सुधारेर नियमित महिनावारी हुन मद्दत गर्दछ ।
६. अमिलो फल खानुहोस्: सुन्तला, कागती, अंगुरजस्ता अमिलो फल खानुहोस् । यसमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा हुने गर्दछ जसले तपाईंको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने गर्दछ र शरिर भित्रको अनावश्यक विषहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
शारीरिक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दा धेरै महिला झुटो बोल्छन् ।
✍ यदि तपाइँ पनि म्यासेजिङ मार्फत आफ्नो पार्टनरसंग सेक्सका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने
तपाइँको पार्टनरले तपाइँका साथमा च्याटिङ
(सेक्सटिङ)मा सेक्सका बारेमा कुरा गर्दा झुटो बोलिरहेको हुनसक्दछ। हालै मात्र गरिएको एक रिसर्च अनुसार, म्यासेज मार्फट सेक्सको कुरा गर्ने बेला झुटो बोल्ने बानी महिलाहरूमा धेरै हुन्छ। उक्त रिसर्चमा २४ प्रतिशत पुरूषहरूको तुलनामा ४५ पतिशत महिलाहरु फोनमा सेक्सक कुरा गर्दा आफ्नो पार्टनरसंग झुटो बोल्दछन। इन्डियाना यूनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर माइकल ड्रोइनका अनुसार धेरैजसो मानिसहरू च्याटिङका क्रममा सेक्सको कुरा गर्ने बेला आफ्ना र पार्टनरलाई खुसी बनाउनका लागी झुटो बोल्दछन। रिसर्चमा सहभागी मानिसहरूले झुटो बोल्नुका धेरै कारणहरू बताएका थिए, जसले पार्टनरको इच्छाहरू पुरा गर्नुका साथै उनीहरूलाई उत्साह भरिदिनका लागी पनि झुटो बोल्दछन। सेक्सटिङका क्रममा झुटो बोल्नुको पछाडीको कारणमा पार्टनरलाइ खुसी गर्नु वा उनको फन्टासीलाइ पुरा गर्ने चाहना पनि रहेको हुन्छ। केही मानिसहरूले आफ्नो पार्टनरलाइ तनावबाट टाढा राख्नका लागी पनि झुटो बोल्ने बताएका छन। आफुले झुटो बोल्दा पार्टनरको प्रतिक्रिया हेर्नका लागी पनि कतिपय महिलाले झुटो बोल्ने गरेको बताएका छन। अध्ययनका अनुसार, केही मानिसहरूले यस कारण पनि झुटो बोल्दछन कि उनीहरू यस कुराबाट दिक्क भैसकेका हुन्छन वा उनीहरूको आसपास अन्य कोही हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यद्दपी, यस कुराको चेतावनी दिएका छन कि सेक्सटिङका क्रममा झुटो बोल्नाले सम्बन्धमा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्दछ। यो निष्कर्ष पत्रिका कन्प्यूटर्स इन ह्यूमन विहेवियरमा प्रकाशित भएको छ।
आमा बनिसकेपछि रोमान्स गर्न किन चाहँदैनन् महिला ?
✍ धेरैजसो महिला आमा बनिसकेपछि उनीहरुको प्राथमिकता परिवर्तन हुने गर्दछ। बच्चालाई जन्म दिइसकेपछि महिला श्रीमानलाई रोमान्सको लागि समय दिन भ्याउँदैनन्। तर, कहिले सोच्नुभएको छ, यस्तो किन हुन्छ? द हेल्थ साइटमा प्रकाशित खबरका अनुसार, यो विषयमाथि ब्रिटिश नन प्रोफिट एड्भाइजरी सर्भिसद्वारा गरिएको सर्वेक्षणमा पाइए अनुसार महिलाहरु बच्चालाई जन्म दिइसकेपछि कम्तिमा पनि ६ महिनाको सेक्स ग्याप राख्न चाहन्छन् र दोस्रो पटकको रोमान्सका लागि उनलाई कम्तिमा पनि यति नै समय लाग्ने छ। उक्त सर्वेक्षणमा भाग लिने १३ प्रतिशत महिला अर्थात आठमध्ये एक महिलाले बच्चाको जन्म दिइसकेपछि केहि समयसम्मका लागि सेक्सबाट टाढा रहने बताएकी छिन्। करिब ४५ प्रतिशत महिलाहरुको भनाई अनुसार बच्चाको जन्मपछि उनीहरु आफ्नो शरिरसँग असहज महसुस गर्दछन्। बच्चा जन्माइसकेपछि फिगर राम्रो नहुने भएका कारण उनीहरु सेक्सको लागि नाई भन्ने गरेको उनीहरु बताउँछन्। फिगरका साथसाथै उनीहरु थकान र अरु समस्याहरुका कारण पनि सेक्सबाट टाढै रहने गरेको पाइएको छ। ब्रिटेनका १३५० जना नयाँ आमाहरुमाथि उक्त सर्वेक्षण गरिएको थियो।
कस्तो बानी भएका महिलालाई पुरूषहरू बढी मन पराउछन? ?
✍ महिलाहरुलाई जस्तै पुरुषलाई पनि महिलाको धेरै बानीहरु मनपर्दैन तर महिलाहरुलाई यो कुराको बारेमा थाहा नै हुँदैन। हामी तपाईंलाई यिनै कुराहरुको जानकारी दिँदै छौँ।
१. लामो नङः तपाईं सायद सोच्नुहुन्छ होला, लामो नङ निकै आकर्षक हुने गर्दछ तर वास्तविकतामा तपाईंको यो लामो नङ पुरुषहरुलाई मन पर्दैन। त्यसकारण महिलाहरु लामो नङको साटो छोटो र आकर्षक नङ नराख्नुहोस्।
२. धेरै परफ्युम लगाउनुः तपाईंलाई आफ्नो परफ्युमको बास्ना जति सुकै मन परेपनी तपाईंको पार्टनरलाई भने यसको हल्का बास्ना मनपर्ने गर्दछ। घरबाट निस्किसकेपछि पनि तपाईंको बास्ना रहिरहन्छ भने त्यो कुरा पुरुषहरुलाई रामो लाग्दैन।
३. उग्रताः महिलाहरुको उग्र स्वभाव पुरुषहरुलाई मनपर्दैन। पुरुषहरुसँग सधैँ टासिइरहनु, उनीहरुबिना आफू केहि पनि नभएको जनाइ रहनु जस्ता कुराहरु पुरुषहरुलाई मन पर्दैन। पुरुषहरु स्वतन्त्र एवं आवश्यक परेको खण्डमा पुरुषहरुको मद्दत लिने महिलाहरुलाई मनपराउने गर्दछन्।
४. मौन रहनुः तपाईं सोच्नु हुन्छ होला कि धेरै पटक मौन बस्दा पुरुषहरुलाई राम्रो लाग्न सक्छ जब कि वास्तवमा पुरुषहरुलाई सुझाव दिने र कुरा बुझ्ने महिलाहरु धेरै मन पर्ने गर्दछ। यदि तपाईंलाई कुनै विषयको बारेमा केहि कुरा थाहा छ भने पुरुषहरुको सामू बोलेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्।
५. आफ्नो पुरानो प्रेमीको कथा सुनाउनुः तपाईंको पुरानो प्रेमीको कुराहरुले तपाईंको प्रेमीलाई रिस उठ्न सक्छ। यदि तपाईं अहिले पनि आफ्नो पुरानो प्रेमीलाई मन पराउनु हुन्छ भने अरु पुरुषसँग बस्नु राम्रो बिचार मानिँदैन। यदि तपाईं बारम्बार आफ्नो पुरानो प्रेमीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानीको पछाडि लुकेको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ।
६. रुखो स्वभावः महिलाहरुको रवाफ र रुखो स्वभाव पुरुषहरुलाई साह्रै नराम्रो लाग्ने बानी मध्येको एक हो। सामान्य रुपमा, पुरुषहरुलाई आफ्नो वरिपरिको मानिसहरुसँग भएको बेलामा रुखो व्यवहार गर्ने महिला कहिले पनि मनपर्दैन।
७.कुरा काट्नुः यदि तपाईंको पार्टनर तपाईंलाई अन्य महिलासँग खासखुस गरिरहेको देख्दछन् भने सायद तपाईं उनको नजर गिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कुरामा जति सुकै सत्यता रहेपनि यसको प्रभाव पुरुषहरुमा नकारात्मक नै हुने गर्दछ।
८.उनलाई परिवर्तन गर्न कोसिस गर्नुः एक पुरुष सधैँ आफ्ना महिलाले उनलाई असल गुणसँगै अपनाओस् भन्ने चाहन्छ। यदि तपाईं कुनै पुरुषसँग घुम्ने निर्णय लिनु हुन्छ र पछि उनको व्यक्तित्व र रुप–रंगलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने उनीहरु स्वयंका लायक महसुस गर्दैनन्। त्यसकारण तपाईंले उनीहरुको अहंकारमा ठेस पुर्याउनुहुनेछ। यदि तपाईंलाई कुनै पुरुष मनपर्दैन भने उनीहरुलाई परिवर्तन गर्न तल्लिन हुनुको साटो अर्को मनपर्ने व्यक्ति खोज्नु नै राम्रो हुनेछ।